HPA ဆုပေးပွဲများသည် Creative အမျိုးအစားများမှ ၀ င်ရောက်မှုများအတွက်ခေါ်ယူခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » HPA ဆုပေးပွဲများသည် Creative Categories တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုကြေငြာသည်
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် Professional Association (HPA®) သည် ၂၀၂၀ HPA ဆုပေးပွဲအတွက်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများကို ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ၁၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပသည့်အခမ်းအနားတွင် HPA Awards သည် HPA အသိုင်းအဝိုင်း၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ အရောင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ အသံနှင့်ပုံရိပ်ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်ကြော်ငြာများတွင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကိုဂုဏ်ပြုသည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာပါဝင်မှုကိုအားဖြည့်ပေးပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုအာရုံစိုက်စေပြီးနောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်မှပူးပေါင်းသူများသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ၏ရူပါရုံကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်ကူညီပေးသည်။
၂၀၂၀ HPA ဆုများကို ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်အွန်လိုင်းဂရမ်၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသော်လည်းဆုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ရန်အတွက် HPA Awards သည်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှင့် ၀ င်ရောက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ယာယီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခကြေးငွေ။
ယခုနှစ်ပြဇာတ်ဖြန့်ဖြူးမှုအပေါ်ရောဂါကူးစက်မှု၏သက်ရောက်မှုကိုလွှမ်းခြုံရန်ပြဇာတ်ရုံဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များအတွက်တင်ပြချက်ကိုချိန်ညှိထားသည်။ HPA ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်သည်
•ထူးခြားသောအရောင်သတ်မှတ်ခြင်း - ပြဇာတ်ရုံလက္ခဏာ
•ထူးခြားသောအရောင်သတ်မှတ်ခြင်း - အပိုင်းသို့မဟုတ်ပြဇာတ်မဟုတ်သောစွမ်းဆောင်ချက်
•ထူးခြားသောအရောင်သတ်မှတ်ခြင်း - စီးပွားဖြစ်
•ထူးခြားသောတည်းဖြတ်ခြင်း - ပြဇာတ်အင်္ဂါရပ်
•ထူးခြားသောတည်းဖြတ်ခြင်း - အပိုင်းသို့မဟုတ်ပြဇာတ်မဟုတ်သောအသွင်အပြင် (မိနစ် ၃၀ နှင့်အောက်)
•ထူးခြားသောတည်းဖြတ်ခြင်း - အပိုင်းသို့မဟုတ်ပြဇာတ်မဟုတ်သောအသွင်အပြင် (မိနစ် ၃၀ ကျော်)
•ထူးခြားသောအသံ (ဒီဇိုင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်း) - ပြဇာတ်ရုံလက္ခဏာ
•ထူးခြားသောအသံ (ဒီဇိုင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း) - အပိုင်းသို့မဟုတ်ပြဇာတ်မဟုတ်သောအသွင်အပြင်
•ထူးခြားသောအသံ (ဒီဇိုင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်း) - စီးပွားဖြစ်
•ထူးကဲသော Visual Effects - ပြဇာတ်ရုံလက္ခဏာ
•ထူးခြားသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ - အပိုင်း (သို့) ပြဇာတ်မဟုတ်သောစွမ်းဆောင်ချက် (အပိုင်း (၁၃) နှင့်အနည်းဆုံး)
•ထူးခြားသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ - အပိုင်း (အပိုင်း ၁၃ ကျော်ကျော်)
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအမျိုးအစားများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တင်ပြချက်, ဇူလိုင်လ6နှင့်သြဂုတ်လ 21, 2020 အကြားလက်ခံလိမ့်မည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားရန်, အလုပ်, အရည်အချင်းပြည့်မီကာလ, စက်တင်ဘာလ 4, 2019, စက်တင်ဘာလ 9, 2020 မှအရည်အချင်းပြည့်မီကာလအတွင်းပြည်တွင်းနှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်ပွဲ ဦး ထွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်သူများလိုအပ် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ ဟောလိဝုဒ် US မှာ Professional ကအသင်းမှသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်
HPA Awards သည်နောက်ကွယ်မှဖန်တီးမှုတစ်ခုလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော HPA Engineering Excellence Award အတွက်လျှောက်ထားသူများအား ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်အထိလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်တရားသူကြီးများဆုချီးမြှင့်ခြင်းကို Gala မတိုင်မီကြေငြာလိမ့်မည်။ အထူးဆုနှစ်ခုလုံးကို HPA Awards တွင်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
HPA ၏ဥက္က္ဌနှင့် HPA ဆုပေးပွဲကော်မတီတည်ထောင်သူ Seth Hallen က“ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လအတွင်းကျွန်တော်မကြာခဏကြားသိခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်ဟာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နှစ်နဲ့မတူဘဲတကယ်တော့ဒါဟာလုံးဝမတူပါဘူး။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲ၏ 15 နှစ်ကသမိုင်း။ ထိုအရာကကျွန်ုပ်တို့အားရှေ့ဆက်မောင်းနှင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုခြင်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်အပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အတူတူအောင်ပွဲခံခြင်း၊ တူညီတဲ့ virtual space မှာရှိလိမ့်မယ်။ ငါတို့အတူတူယူဆောင်လာမယ့်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုစီစဉ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတင်သွင်းပါ၊
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲဆုပေးပွဲခေါင်းစဉ်စိန်စပွန်ဆာအတွက်ရက်ရက်ရောရောစပွန်ဆာမှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြတယ် Blackmagic ဒီဇိုင်း Dolby နှင့် Zeiss တို့ကိုစပွန်ဆာပေးခဲ့သည်။ စပွန်ဆာပေးသောသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်ကြော်ငြာအခွင့်အလမ်းများအတွက် Joyce Cataldo သို့ဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
ပြည့်စုံသောစည်းမျဉ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများနှင့် ၀ င်ရောက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို HPA Awards အားလုံးနှင့်ယခင်ဆုရှင်များစာရင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ hpaonline.com.
ဆုပေးပွဲ အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် တည်းဖြတ်ခြင်း HPA ဖားအံဆု အသံက Visual Effects 2020-07-08
ယခင်: Dejero နှင့် First Mile တို့သည် COVID-19 နှင့် ကျော်လွန်၍ ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်
နောက်တစ်ခု: SonyLIV နှင့် NetRange တို့သည်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများတိုးချဲ့ရန်